News - Asalka Iyo Taariikhda Saliidaha Muhiimka ah
Asalka Iyo Taariikhda Saliidaha Muhiimka ah
Shiinaha dhab ahaantii waa ilbaxnimo qadiim ah oo markii ugu horeysay isticmaashay dhirta udugga ah si loo ilaaliyo caafimaadka. Dhirta waxaa la isticmaali jiray waqtiyadii hore, iyadoo la adeegsan jiray astaamaha dhirta si loogu daaweeyo cudurada, iyo fooxa la gubo si loo caawiyo aasaasida wada noolaanshaha iyo isu dheelitirka jirka iyo maskaxda. .
Sixirka dabeecadda wuxuu ina siiyay ilo nololeed oo isdaba-joog ah, sidoo kale waa hadiyadda dabeecadda ee aadamaha, si aan markasta ugu raaxeysanno khasnadaha kala duwan ee ay bixiso, dhirta saliidaha lagama maarmaanka ahna ay kamid tahay. Taariikhda isticmaalka aadanaha ee saliidaha lagama maarmaanka ah waa inta taariikhda ilbaxnimada aadanaha, iyo asalka dhabta ah ay adagtahay in la xaqiijiyo. Sida ku xusan diiwaanka taariikhiga ah, dhakhtar carbeed ayaa isticmaalay muxaadaro si uu u soo saaro nuxurka ubax, kaas oo laga sameeyay saliidaha lagama maarmaanka ah ilaa iyo xilligii uu soo korayay ee Griigii hore. Waa la arki karaa in buugaagta caafimaadka ee waqtigaas la duubay adeegsiyo badan oo wax ku ool ah oo saliidaha lagama maarmaanka ah, xitaa Masar hore ka hor 5000 BC. Wadaad sare ayaa mar uun mayd ka buuxiyey udgoon udgoon ah si uu u sameeyo mumay. Waad qiyaasi kartaa sida qaaliga u ahaa saliidaha lama huraanka ah waqtigaas.
Diimaha badan ee qadiimiga ah ama kooxaha qowmiyadeed, nooc kastoo xaflad ama dabaaldeg ah, dhir udgoon oo laga soo saaray dhirta ayaa had iyo jeer loo isticmaali jiray in lagu daro karaamada xafladda. Waxaan ka baran karnaa khuraafaad badan ama sheekooyin kitaabiga ah. Waxaa laga heli karaa diiwaanka.
Qarnigii 13aad, Bologna School of Medicine ee caanka ah ee Talyaaniga ayaa ikhtiraacay suuxdin ka samaysan saliid kala duwan oo muhiim ah, taas oo si ballaaran loogu adeegsaday hawlgallada qalliinka. Hugo, oo alifay dawadan, ayaa la sheegay inuu sidoo kale ka yimid Bologna School of Medicine. Aasaasihii.
Qarnigii shan iyo tobnaad, Verminis wuxuu ikhtiraacay nooc ka mid ah "biyaha cajiibka ah", ka dibna inantiis ayaa samaysay caanka "Fanari Cologne". Cologne-ka noocan ah waxaa lagu caddeeyay inuu leeyahay saameyn jeermis dilis ah, cologne noocan oo kale ah waxaa sidoo kale lagu sameeyaa saliidaha lagama maarmaanka u ah dhirta ubaxa.
Faransiiska qarnigii 16aad, dadka qaar waxay u barteen inay xirtaan galoofyada dhir udgoon oo ay ku jiraan lavender iyo geedo kala duwan oo maxalli ah. Natiijo ahaan, kuwa xirnaa galoofyada dhir udgoon waxay u adkeysanayeen qaar ka mid ah cudurrada faafa xilligaas. Ganacsato badan ayaa bilaabay inay ku takhasusaan. Soo saarida saliidaha lagama maarmaanka u ah carafta. Noocyada saliidaha lagama maarmaanka ah waxay sidoo kale ka caawiyeen Griiggu inay iska caabiyaan cudur faafa. Tan iyo markaas, udugga udgoon ee saliidaha lagama maarmaanka ah waxay soo jiidatay indhaha aqoonyahanno badan waxayna tan iyo markaas ku faaftay meelo kala duwan. Gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyay, udugga ayaa si tartiib tartiib ah u kordhay. Soo jiito dareenka adduunka.
Maanta, saliidaha lagama maarmaanka ah ayaa si ballaaran loogu isticmaalay dhammaan dhinacyada. Xarunta ugu weyn ee wax soo saarka saliidaha lagama maarmaanka ah ee adduunka waa magaalada qadiimiga ah ee Grasse oo u dhow Faransiiska Riviera. Sidaa darteed, ka sokow khamriga, Faransiiska sidoo kale waxaa loo tixgelin karaa inuu yahay dhul quduus ah oo saliidaha lagama maarmaanka ah maanta.